यसरी सक्रिय हुँदैछ नेपालमा रअको मिसन – Aggrani News
यसरी सक्रिय हुँदैछ नेपालमा रअको मिसन
शुक्रबार, कार्तिक २१, २०७७ ७:५६:२४
काठमाडौं । सामन्त गोयललाई गत वर्ष रअका प्रमुख बनाइएको थियो । प्रमुख बने लगत्तै गोयलको टोली नेपाल आयो । गत वर्ष ५ साउनमा रअको टोली त्रिभुवन विमानस्थल ओर्लिएको थियो
रअको टोली नेपाल आएको समाचार केही मिडियाले मात्र दिएका थिए
गोयलको टोलीले रातभरी गुप्त भेटघाट गरेको थियो । तर, रअका प्रमुख नेपाल आएको कसैले औपचारिक पुष्टि गरेन । बरु, भारत निकट मिडिया तथा बुद्धिजीवीहरुले रअ प्रमुख नआएको भनी खण्डन नै गरे ।
रअ प्रमुख गोयलको टोली भोलिपल्ट ६ साउनमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटार पुग्यो । प्रचण्डको सचिवालयले रअका प्रमुखसँग भेट नभएको दावी गर्दै हावादारी समाचार हो भन्यो । त्यसो भनेको केही बेरपछि सनराइज खबरमा रअका प्रमुख प्रचण्डको निवासमा पुगेको फोटो सहितको समाचार प्रकाशित भयो । त्यसपछि खण्डनले काम नगर्ने अवस्था आयो । रअ प्रमुख र प्रचण्डको भेटको प्रमाण नै सार्वजनिक भएपछि प्रचण्डको सचिवालयले अर्काे चाल चल्यो ।
चाल के चल्यो भने ‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि रअ प्रमुखसँग भेटेको’ भन्दै निकट मिडियाहरुबाट प्रचार गराउन थालियो । आफूले भेटेको अकाट्य प्रमाणित भएपछि ओलीले पनि भेटेको भनेर आफ्नो छवी बचाउने प्रयास थियो त्यो । अर्थात्, आफू हिलोमा डुबेपछि साथीलाई पनि हिलो दलिदिने काम भयो ।
रअको टोली फर्किएपछि नेपाली राजनीतिमा विचित्र लिला देखिन थाल्यो । सत्तारुढ नेकपाभित्र गडबडी सुरु भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने, प्रयास सुरु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रष्टसँग घेरावन्दी थालियो ।
रअका प्रमुख नेपाल आएर फर्किए लगत्तै खासखास मिडियाहरुले सरकार विरुद्ध मोर्चा समाले । सरकार र ओलीलाई जसरी पनि बदनाम गर्ने उद्देश्यले अनेक प्रायोजित समाचारको बाढी आउन थाल्यो । सरकारलाई जसरी पनि बदनाम गर्ने अनि केपी ओलीलाई नालायक र भ्रष्ट सावित गर्ने उद्देश्यले सुनियोजित रुपमा अनेक समाचार लेख्ने लेखाउने अभियान नै चल्यो । फेक समाचार फैलाउने, अलिकति तथ्यमा पूरै असत्यको जलप लगाएर ओली र सरकारमाथि आक्रमण गराउने अभियान अहिले पनि जारी छ ।
रअका प्रमुख आउनु अघि गुप्त भ्रमणमा भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणलाई नेपाल पठाइने गरेको थियो । पहिले नेपालका राजदूत समेत रहेका श्यामशरणले नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्न र मधेसवादी दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याएर डा. बाबुराम भट्टराईलाई साझा नेता बनाउन भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
रअ प्रमुख गोयलको पहिलो भ्रमणपछि नेकपाभित्र सुरु भएको गडबडी अहिलेसम्म साम्य भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको घेरावन्दी अझ कसिलो बनाउँदै लगियो भने नेपालभित्र रअको सक्रियता झनै बढ्यो । त्यसपछि ओली सरकारले एउटा विधेयक तयार पार्यो । नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्यो । सो विधेयकमा नेपालमा विदेशी गुप्तचरहरुको सक्रियता हेर्न, अनुगमन गर्न तथा कारवाही गर्नका लागि कानुन बनाउन ल्याइएको थियो । तर, सो विधेयक अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।
जानकारहरु भन्छन्– सो विधेयक दर्ता भए लगत्तै सामन्त गोयलको टोली नेपाल आयो । पहिलो भ्रमणको पोल खुलेकाले दोस्रो भ्रमण अत्यन्तै गुप्त राखियो । पहिलो भ्रमणको पोल प्रचण्डको सचिवालय, खासगरी त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीले पहिचान गर्नाले खुलेकाले दोस्रो भ्रमणका बेला रअको टोली नेताहरुको निवासमा गएन । बाहिरै भेटघाटको प्रबन्ध मिलायो ।
यो भेटघाटपछि नेकपाभित्र झगडा झन् चर्कियो । प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध भिषण आक्रमण सुरु भयो । फेक न्युज कारखानालाई पनि चरम व्यस्त बनाइयो ।
तर, केपी ओली सरकार ढलेन । रअ र भारतले ओली विरुद्ध आक्रमण जारी राख्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बाध्य भएर सार्वजनिक रुपमा भन्नपर्यो– मेरो सरकार ढाल्न दूतावासहरु सक्रिय छ । अर्थात्, भारत सक्रिय छ । प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णायक रुपमा पोल खोलिदिएपछि भारत सार्वजनिक रुपमै सक्रिय भयो भने ओलीलाई हटाउने नेकपाभित्रको अभियान पनि नांगो रुपमा बाहिर आयो ।
तैपनि सरकार गिरेन । ढलेन ।
त्यसपछि नेपाल आयो अजित डोभलको टोली । रअ प्रमुख सामन्त गोयल र आईबीका प्रमुख अरविन्द कुमार सहितको यो टोली स्थल मार्ग भएर नेपाल आएको थियो । गत असार तेस्रो साता यो टोली आउनुको उद्देश्य एउटा मात्र थिएन । डोभलको टोली नेपाल आउँदा भारत र चीन बीच गलवानमा चरम द्धन्द भइरहेको थियो । भारतीय गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, सेना प्रमुख त्यहाँ पुगिरहेका थिए । तर, त्यस्तो परिवेशमा भारतमा अजित डोभलको उपस्थिति र अभिव्यक्ति कहिँ कतै देखिएको थिएन ।
भारतीय मिडियाहरुका अनुसार अजित डोभलको टोली गुप्त काममा उत्तर भारतको चीनसँग सीमा गासिएका देशहरुमा खटिएको थियो । यो टोलीको साथमा प्राविधिकहरु, ज्योग्राफरहरु पनि थिए । यो टोली पहिले म्यानमार गएको थियो । त्यसपछि भूटान गयो । भूटानबाट स्थल मार्गबाट काठमाडौं आयो । यो टोली यस क्षेत्रको भूगोल हेर्न र आकाशीय मार्गको सर्भे गर्न आएको बताइन्छ ।
काठमाडौं आइपुगेको यो टोलीको फोटो सार्वजनिक हुन सकेन तर भारतीय र नेपाली मिडियाहरुले यो भ्रमणको पोल खोलेका थिए ।
त्यसपछि विशेष दूतका रुपमा रअ प्रमुख गोयलको टोली गत साता नेपाल आएको हो । विशेष दूत एक्लै आए हुनेमा करिब एक दर्जनको टोली लिएर किन आए ? प्रधानमन्त्री ओलीको स्पष्ट असन्तुष्टि रहेको बुझिन्छ । रअ प्रमुखसँग आएका सबैजना स्वदेश फकिएनन्, दुई जना यतै मोर्चा समालेर बसेको बुझिन्छ ।
रअ प्रमुखको विशेष विमान दिउँसो १२ बजेर केही मिनेट जाँदा त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिएको थियो । टोली आए लगत्तै नेपाली मिडियामा उनीहरु आएको सार्वजनिक भयो । गुप्तचर प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा तथ्य सार्वजनिक गरेको विश्वमा विरलै सुनिन्छ । तर, गोयलको टोलीले भ्रमण सार्वजनिक गर्यो ।
विशेष दूतका रुपमा रअ प्रमुखलाई नै पठाइनुलाई प्रधानमन्त्री ओली निकटहरुले अनौठो रुपमा लिएको बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले सनराइज खबरलाई भने– ‘भारतले कूटनीतिको नाममा षडयन्त्र गर्यो ।’
पर्दा पछाडिबाट आक्रमण गरेर, फेक समाचारको कारखाना चलाएर तथा नेकपाभित्र अन्तरध्वंशको अभियान चलाएर पनि असफल भएपछि रअका प्रमुख आफैं मैदानमा उत्रिएको प्रधानमन्त्री निकटहरुको बुझाई छ ।
‘रअका प्रमुख राम्रो नियतले आएका होइनन्, सम्बन्ध सुधार्न आएका पनि होइनन्, प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम बनाउन सुनियोजित रुपमा जाल बुनेर आएका हुन् भन्ने प्रष्ट देखियो । अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई बदनाम बनाउने र हटाउने अभियान अझ तिब्र बन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ’– ती नेताले सनराइज खबरलाई भने ।
नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्था रअ पहिलेदेखि नै सक्रिय थियो । माओवादीले जनयुद्ध थालेपछि यो गुप्तचर संस्थाले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति झन्झन् बढाउँदै लगेको थियो । पूरै भूमिगत रहेको तत्कालीन माओवादीमा समेत रअको गहिरो घुसपैठ थियो । बाबुरामलाई पार्टीले कारवाही गर्दा जोगाउने काम रअले नै गरेको थियो । भूमिगत माओवादी भित्र समेत रअको त्यस्तो पहुँच र प्रभाव थियो भने खुला पार्टीहरु भित्र पनि अवश्य थियो ।
संविधान निर्माण हुन नदिन रअले नांगो रुपमा काम गरेको थियो । संविधान बनेपछि भारतले नाकावन्दी नै लगायो । अहिले नेपाल विकास र स्थिरतामा गएको छ । यस बीचमा भारत र चीन बीच द्धन्द चर्किएको छ । माल्दिभ्समा जस्तै आफ्नो दलाल बन्ने सरकार भारतलाई नेपालमा चाहिएको छ । त्यसैले नेपालमा रअ पहिलेभन्दा धेरै सक्रिय भएको जानकारहरु बताउँछन् ।